Maalmahan ayaa iigu horreysay in aan go’aansado in aan Mujaahid Bashir si hagar-la’aan ah wax uga qoro. Horeba hindisuhu wuu iigu jiray, laakiin is-ma aan lahayn macluumaadka aan immika helay oo kale waad helaysaa. Macluumaadkan aan cuskanayaa laba ilood oo muhiim ah ayay ka soo burqadeen:
Mujaahid Maxamed Ibraahin Xirsi oo loo yaqaannay ama magac-dagaaleedkiisu ahaa Mujaahid Bashiir, wuxu ku dhashay magalada Geed-ballaadh, 1956kii sida uu ii xaqiijiyay walaalkii Cabdiqani oo loo yaqaanno Abaadir. Waxa kale oo iyaduna sidaas aamminsan oo ii sheegtay Maryan oo da’ ahaan ku xigtay isaga. Hooyadii waxay ahayd Caasha Sheekh Cabdillaahi Ciise, waxaanay ku dhimatay magaalada Hargeysa muddo immika laga joogo lix sannadood ka hor, sida ay saaka (10/9/2015ka) ii caddaysay Maryan oo aan Hargeysa ku booqday saaka meheraddeeda Degmada Kood-buur ku taal. Waxa kale oo ay Maryan ii sheegtay in aabbaheed Ibraahin Xirsi Kaahin, isaguna ku geeriyooday magaalada Hargeysa, bishii Oktoobar 1993kii.
Xukuumaddii Siyaad Barre ayaa ku toogatay Hargeysa horraantii 1987kii markii gurigiisa laga soo saaray qori AK47 ahaa oo Bashiir ku aasay. Garo’ oo waxa Cismaan la tooganayaa dilkii Axmed Aadan ka dib. Wuxu ka tegay afar wiil iyo laba gabdhood oo dhammaantood hooyadood la nool.
Wuxu dhashay 1945kii. Wuu nool yahay, waxaanu deggen yahay Calool-la’, waa xaas carruurna weli ma yeelan.
Muuqaalka Axmed Aadan, waxa kale oo Mujaahid ku tusay xarunta Nabadsugidda Mujaahid Qureysh iyo Mujaahid Maxamed Oomaar. Sidii ay looga-qaateenku ii sheegeen, Mujaahid Bashiir wuxu ahaa qof keliya ee magaalada Hargeysa kelidii lugeyn jiray maalintii maa-daama uu Xamar noloshiisa intii badnayd ku soo qaatay oo aan la garanayn.
Maa-daama uu dhaqankaa qosol-ku-jabka ah dadweynaha tusi jiray, wuxu heli jiray wararka ugu badan ama xogta ugu badan ee jabhaddii hubeysnayd ee SNM. Sidaas ayay SNM-na ugu arkaysay in uu yahay cadowga 1aad ee ay ku leedahay Hargeysa. SNM wuxu u ahaa yool shiishku haysto oo mar walba laga fekerayay khaarajintiisa.
Haddii aynu tusaale kale barbar dhigno, waxa jiray nin isaguna ba’naa oo Jeneraal Gaanni la odhan jiray. Bahal qallafsan oo cadow ah ayuu ahaa. Xanuunkii iyo xasuuqii uu dadka ku hayay, dadweynuhu aad ayay uga cadhoon jireen oo ay u kici jireen, dhinaca SNM-tana ugu soo biiri jireen. SNM-tu, waxay u taqaannay ‘Diiriye.’ Ninkan Axmed Aadan se, waa uu ka duwanaa oo isagu marka indhaha SNM lagu eego, wuxu noqonayay Seexiye ama Suuxiye. Halis aan la malaysan karin ayuu ku ahaa halgankii hubeysnaa. Wuxu ahaa nin dadka buste saarayay oo u sakhirayay nidaamkii bahalka ahaa ee Siyaad Barre. Sidaas ayuu ku noqday yool mar walba u tagnaa in la abbaaro oo khadka laga saaro, inta kalena lagu cabsi geliyo oo sas iyo sakati lagu beero. Nidaamkii Siyaad Barre ayaa laga bartay qaababka saska iyo sakatiga loo abuuro. Heesihiisii waxa ka mid ahaa: “Hadhkaagaa lagu diray, Haatuf kula socdaa jira.”
Mujaahidiinta SNM waa ay dhammaysteen sahankooda iyo qaabka ay u hawl-gelayaanba. Mujaahid Maxamed Oomaar oo Mujaahidiinta hawl-galka fulinaysay baabuurkiisa ku sii qaaday ayaa igu yidhi, mar aan arrintaa ka wareysanayay:
“Annaga oo iska qayilaynay habeennimadii oo dhammaantayo wada joognay, ayuun baa Bashiir oo aan is-idhi malaha waa uur-ku-baalle mar qudh ah nagu yidhi: ‘Ina kiciya caawa ayaynu hawl-galkii fulinaynaa oo ninkii aynu meeshii ka helaynaaye.'”
19/12/1986kii, goor ay saacaddu ku beegnayd ilaa sagaalladii habeennimo, ayay ciidankii hawl-galka fulinayay oo afar Mujaahid ahaa hor fadhiisteen Dhakhtarki la dumiyay ee haweenka lagaga ummulin jiray ee Cosob oo u dhow Xarunta Wargeyska Jamhuuriya. Saaqiyadaha biyo-mareenka ah ayay dukl fadhiyeen. Cabbaar haddii ay halkii fadhiyeen oo ay ku sugayeen Taliyaha xafiiskii Nabad-sugidda ayuu ka soo baxay xaruntiisii oo ahayd halkan dibudejintu deggenayd.
Waa baabuurkiisii oo Pajero midabkiisu boodh yahay ahaa. Waa ay dabo-socdeen ilaa meel ku dhaweyd tiyaatarka oo uu dhaqan iyo caadaba u lahaa in uu tago. Meel u dhow ayay Mujaahidiintu baabuurkii kaga degtay ka dibna rasaastii ayay bilaabeen. Halkii waxa ku qudh-baxay shan qof oo uu Axmed Aadan ku jiray.
Muuse Biixi oo ka hadlayay hawlgalladii iyo dagaalladii uu ka qayb-galay Mujaahid Bashiir, wuxu yidhi:
“……..Intaasi waa inta ugu mudan wixii uu gudha ka qabtay, bal se inta hawl-gallo ah ee ciidammada uu dibadda (xuduudda) kula galayna waa ay yaraayeen oo kii Balli-cabbane waa uu nala galay, weerarkii Geed-ballaadhna waa uu nala galay ee dhibta badnaa, ragga badanina ku dhaawacmi jireen waa uu nala galay oo labadaba gaadhiga ayuu la socday oo waan xasuusta.”
Habeenkii hawl-galka ka-dib iyo Mujaahid Bashiir
Ma maqli jirteen: “Ka-rog oo mid kale saar.” Mujaahid Abaadir ayaa hadba sheeko hor leh oo walaalkii Shahiid Bashiir la xidhiidha inoo saraya. Bal markanna wuxu inoo marinayaa, habeenkaa markii uu dilkaasi dhacay, halkii uu Mujaahidku tegay iyo sidii uu yeelay.
Habeenkaa hawl-galkaas waxa la fuliyay xilli ay saacaddu ku beegnayd ilaa tobannadii habeennimo. Afartii Mujaahid ee hawl-galkaa fuliyay Bashiir iyo Nuur Muhindis dhinac ayay isu raaceen, Cismaan Awr-liqena dhinac kale ayuu u baxay, Maxamed Oomaar oo baaburka ku sidayna isagu markii uu dhigayba wuu ka tegay hawl-galkaba hortii. Sidaas ayay laba jiho u kala qaadeen. Xilli ay sacaddu ku beegnayd 12.00kii habeennimo ayay Bashiir iyo Nuur Muhindis iyaguna kala leexdeen ama kala tageenba oo midba meel gabbaad u doontay. Mujaahidiintu dhowr habeen ayay sii joogeen Hargeysa.
Bal hadda immikana aan ku yar raasukhno sheekadan uu u mariyay Ismaaciil Xasan Xirsi, waxaanu ka weriyay Abaadir oo uu yidhi:
“19/12/1986kii, habeennimadii markii uu dilka fuliyay wuxuu u yimid Ismaaciil Xasan Xirsi oo aanu Ima-adeer ahayn oo ‘waashimaan’ ka ahaa geerash weyn oo ku yaal Gannad korkeeda. Geerashkani wuu sii jiraa mana shaqeeyo.”
Bal hadda immikana aan Ismaaciil ka yar gurno markii uu Bashiir u yimid tallaabooyinkii uu qaaday, waxaanu intaa hore ku kabay:
“Bashiir gurigii yaraa ee aanu deggenayn ayuu ka wada saaray alaabtii taallay. Shamaciina waa uu ka qaaday. Sibidhkii oo khali ah ayuu soo reebay, wuxuu soo qaday fur wayn oo foosto-gobolo. Dab ayuu ku dul shiday isla qolka dhexdiisii. Salli aad u googo’an oo aanu tuuray ayuu dhulka ii dhigay, gacanta midigna aad ayuu ii duubay saliid badanna wuu ku shubay. Salligii ayuu i jiifiyay barkimo xun oo aad u usgag badnaynna wuu ii dhigay. Barkimadaas ayuu qorigiisiina ka hoosaysiiyay, isaguna shaad usgagoobay iyo macawis xoog u jactadday oo aan iska beddelay ayuu xidhay. Guriga marka la soo galo waxaad mooddaa dad aanay nafi u dambaynini in ay galaan.”
Isla habeennimadiiba hay’adihii nabadgelyada ee nidaamku waxay soo rogeen bendoo aanay cidina dhaqaaqi karin iyo magaalada oo dhan in si dhakhso isla habeennimadaas loo baadho. Waa sida aanu ka soo xigannay looga-qaateenkii saraakiishii xilalka haysay ahayd markaas ama berigaaba.
Ismaaciil oo uu Mujaahid Bashiir ku soo dhuuntay buulkiisii yaraa ayaa sheekada inoo wada, waxaanu intaa hore ku kabayaa, sida uu Abaadir qoraal iigu soo gudbiyay:
“Habeennimadaas ayaa albaabkii geerashka xoog loo tumayaa. Wuu kacay, wuu furay, waxaana soo galay askar aan ku qiyaasay ilaa tobaneeye. Siday u soo yaacayeen ayay I dul yimaaddeen, markii ay waayeen wax ay baadhaan oo ay ku raagaan ayaa inta aanay su.aal na weydiin ayuu Bashiir ku yidhi: “Odeygan oo aabbahay ah oo geerashkan ku jabay ayaan meesha ku hayaa.
Deg-deg ayay guriga uga wada baxeen. Geerashkii ayay muddo saacad-ku-dhawaad ah baadhayeen oo ay ku raageen. Ka-dib markii ay waxba ka waayeen ayay iyaga oo tallaabada deddejinaya naga baxeen. Waxay galeen guri daso ahaa oo uu geli jiray Cismaan Xasan Xirsi. Waa ninkan geerashka ‘waashimaanka’ ka ah walaalkii. Dasadan ama buulkan ay galeen waxa yaallay qori RBD ah oo Mujaahid Bashiir hore ugu keenay, waxaanu ku jiray saqafka sare ee buulka caws-saloollo dhexdood. Waxoogaa ayay galalafeen. Waxba way ka waayeen, deg-deg ayaanay nooga baxeen.”
Sheekada idin kama kala jaro e’, qormadan 9aad waxay ku soo beegantay 29-guurada hawl-galkaas colka wadhaf ma lagu dayayTaana Ilaahay ka badbaadi. Marka uu masiibo ka badbaadaba mid kale ayaa meel u sii taal. Weli Ismaaciil ayaa inoo kalwinaya. Waxa qoraal ahaan iigu soo tebiyay, Mujaahid Abaadir oo uu uga sheekeeyay, sidaas ayaan aniguna hadba hadhuub idiin soo darayaa. Intaa hore wuxu ku sii karayaa:
”Cismaan Xasan Xirsi gaadhi-ximaar ayuu ku shaqaysan jiray, waxaanu u ahaa xuddun udub- dhexaad ha oo uu xataa ku dhuuman jiray, waayo buullooyinka noocan oo kale ah wax muhiimmad ah adigaagaasi ma siin karaysid qof dirqi-ku-nool ahi wuxu haleelayoba ayaa iska yar. Laba bilood ka-dib dilkii Axmad Aadan waxa la qabtay Cisman Xasan Xirsi, isaga oo ay basaaseen dad nidaamka u shaqaynayay. Gurigiisa oo xoog loo baadhay waxa laga helay hal qori oo dabo-laab ahaa. Qabashada Cismaan kama annaan dabo-tegin. Ma jiro qof xaafadda ah oo ka xaadiray meelihii ninkaa lagu ciqaabayay. Saddex toddobaad ka-dibna waa la khaarajiyay. Cismaan Xasan Xirsi waxa lala dilay lix nin oo kale oo Hargaisa laga soo xidh-xidhay, isaga qori ayaaba lagu qabtay e’, waxa igu maqaale ah in lixda nin ee kale ay ku jireen qaar ganacsadayaal ahaa oo la iska qabtay uun.”
Sida aanu xogta ku hellay Bashiir iyo Nuur Muhindis dhowr habeen ka dib markii ay hawl-galka fuliyeen ayay Hargeysa xagga woqooyi uga baxeen iyaga oo u sii jeeday saldhigyadii SNM ee xuduudda ku yaallay. Sida uu noo sheegay Mujaahid Maxamed Oomaar oo si dhow ula socday hawl-galladaasi, labada Mujaahid ee Bashiir iyo Nuur Muhindis waxay sii mareen jiiddaa Horu-haadlay, ka dibna waxay ku hagaageen Guluc iyo gurigii abtigii ee lagu gunnayn jiray ama xilliyadaas oo kale loogu loogi jiray. Waxa sheekada naloogu daray intii ay jidka sii socdeen in ay sii abaal-mariyeen dabo-dhilifyo nidaamkii dalka ka talinayay u adeegi jiray.
Marwo Mujaahid Aamina Xasan Suldaan oo ah xaaskii Sheekh Muuse Sheekh Cabdillaahi oo ka muddaakaroonaysay xaaladdii uu xilligaa ugu yimaaddeen labada Mujaahid, waxay noo sheegtay in Mujaahid Bashiir ay labada lugoodba saantu ka baxday oo uu ku duudduubay garankiisii oo uu jeex-jeexay. Waxay intaa noogu dartay in Nuur Muhindis isaga ka yar roonaa oo iska ladnaa.
Fal-celintii Nidaamkii Siyaad Barre ee hawl-galkii Axmed Aadan
Isla habeeenkii dilku dhacayba, bendoo ayaa magaalada lagu soo rogay. Baadhis ballaadhan oo aan meelna la dhaafin ayaa magaalda lagu galaa-bixiyay. Subaxnimadii ama maalinnimadii xigtay ee 20/12/1986kii, waxa la qaaday bendoodii, waxaana la bilaabay baadhis lagu raadinayo ciddii dilka geysatay.
Maxamed Oomaar wuxu ii sheegay in ay isaga iyo Bashiir 20/12/1986kii oo ahayd maalintii ku xigtay dilkii Axmed Aadan ay ka qayb-galeen xaflad lagu xusayay 43-guuradii dhismihii ciidanka booliska oo ahayd 1943kii oo ku qabsoontay Tiyaatarka Hargeysa, halkaas oo ay goob-joog ka ahaayeen. Wefdi culus oo Xamar ka yimid maalintaas ayaa xuskan ka soo qayb-galay oo uu hoggaaminayay Axmed Maxamuud Faarax oo ka tirsanaa Guddidii Siyaasadda.
Jeneraal Moorgan oo markaa ahaa Taliyihii Qaybta 26aad oo xarunteedu Hargeysa ahayd ayaa 20kii bishii Diisambar, 1986kii, subaxnimadii isugu yeedhay saraakiil badan oo ay ku jireen qaar u dhashay magaalada Hargeysa. Jeneraal Morgan, hadal koobnaa oo uu halkaa ka jeediyay wuxu ku sheegay in weli la baadho dilkii John F. Kennedy ciddi geysatay. Waxa kale oo subaaxdaa yidhi sidaa darteed, in kasta oo uu Axmed Aadan dhintay weynu ku qasban nahay in la baadho oo la helo cidda dilkiisa geysatay. Wuxu hadalkiisii ku soo gunaanaday isaga oo ku yidhi saraakiishii reer Hargeysa idinka ayaa meesha deggen oo nooga faro-dhuudhuuban e’ aad uga hawl-gala. Looga-qaateenkii sheekadaa ii marinayay ee maalintaa goob-joogga ka ahaa markii uu intaa igu lahaa, ayuu isu jawaabay oo yidhi: “Taasina runtiis ayay ahayd.”
14kii, Jeeniweri 1987kii ayay ciidammadii SNM daahir-yaa-shamis maalin cad soo weerareen saldhigga booliska ee Burco. Dhimasho iyo dhaawacba waa ay geysteen, hal baabuur oo gurmad ahaana miino ay u dhigeen ayaa la kacday. Waa uun 25 maalmood ka dib dilkii Axmed Aadan.
Ninkii Morgan ayaa Taliskii Guud ee Xamar iyo Madaxtooyadii canaan dhegaha goosteen oo lagu yidhi adigana berrito adiga oo iska fadhiya qudha ha kaa jareen. Arrintii ayaa dareen hor leh Morgan ku dhalisay, ka-dib wuxu ku tallaabsaday tallaabooyinkan hoos ku taxan:
Bendoo ayaa Burco iyo Hargeysaba lagu soo rogay,
Saraakiil badan ayaa la xidhay.
Burco iyo Hargeysa waxa laga soo raafay oo la xidhay ilaa 85 odey oo muddakarkii shacbiga ahaa,
Saraakiishaas oo qaarkood xidhnaayeen laba bilood, qaarna lix bilood inta la soo daayay ayaa dhammaantood loo mastaafuriyay koonfur. Markii la soo daayay, intii aan la mastaafurin ayuu dhammaantood Morgan u yeedhay oo ku yidhi hadal u ekaa waa la idin xidhay, waad dhibsateen xadhigga, annaguna dib idiin aammini meyno. Ilaa 19 sarkaal ayaa nimankaa la iigu sheegay.
Waxa kale oo la toogtay ilaa toddoba qof oo uu ku jiray Cismaan Xasan Xirsi oo ay Bashiir Ilmo-adeer ahaayeen isla markaana lagu helay qori dabo-laab ah oo Bashiir gurigiisa keenay.
Sidii uu ku shahiiday Mujaahid Bashiir
Mujaahid Bashiir wuxu shahiiday 3/4/1987kii xilli uu waqtigu ku beegnaa barqadii. Wuxu ku shahiiday guriga Reer Abshir Xuseen oo ku yaalla xaafadda Biyo-dhcay ee Hargeysa. Ilaa maantadaa aan joogno la iskuma raacsana qaabkii uu u shahiiday Mujaahid Bashiir. Dhowr aragtiyood oo kala duwan ayaa arrintan ka jira oo weli lagu muransan yahay. Bal hadda aan aragtiyahaa ama fikradahaa xabbad-qaadno:
Aragtida Ciidammadii cadowga ee ku xeersanaa: Nimankaas oo badnaa oo saraakiil iyo dabley isugu jiray caddaymo sladhigga dhexe ee booliska ee Hargeysa lagaga qaaday oo laga saxeexay waxay ku sheegeen in ay Mujaahid Bashiir iyagu toogteen iyaga oo iska difaacayay rasaas baastooladeed oo uu ku soo riday. Nimankaas oo dhowr iyo toban ahaa waxay iska dabo-mareen in ay guriga oo wada xidhnaa qol-qol ay u baadheen, hal qol mooyaan e’. Waxay caddaymahooda oo saxeexan, taariikhaysan oo intooda badani makiinad ku garaacan tahay ku sheegeen in iyaga oo sii baxaya qol xidhnaa oo ay ka tageen oo aanay jebin rasaas laga riday. Sida ay ku andacoonayaan, inta ay dib ugu noqdeen ayay albaabkii jabiyeen. Waxay leeyihiin waxa halkaa ka dhacay dagaal faraha la isula tegay kaas oo ay ku dhaawaceen Khadar Abshir, halka Mujaahid Bashiir ku dhintay. Waxay qiraalkoodaas ku qoreen in labadaba dhaawac ku qaadeen bal se Mujaahid Bashiir naftu ka baxaday markii dhakhtarka la gaadhsiiyay. Waxa kale oo ay sheegeen in Khadar Abshir ay caloosha kaga dhacday, halka ay Mujaahid Bashiir ku sheegeen in uu gafuurka dhiig ku lahaa.
Aragtida qaar ka mid ah saaxiibbadii iyo Mujaahidiintii: Aragtidan oo ah ta labaad waxay odhanaysaa Mujaahid Bashiir wuxu ku dagaallamay baastooladdii uu sitay oo uu wax ku dilay waxna ku dhaawacay. Aragtidani waxay leedahay shan xabbadood oo keliya ayaa baastooladda ugu jiray. Saddex askartii ku xeerrayd ayuu ku toogtay oo dhaawac iyo dhimashaba ku geystay, labadii kalena mid Khadar ayuu caloosha kaga dhuftay, midna isaga ayaa afka gashaday oo isku dhuftay. Garo’ oo hadda iyaga qudhooda ayaa maragga isku furaya marka ay leeyihiin gafuurka ayuu dhiig ku lahaa. Looga-qaateenka ayaa sheegay in Mujaahid Bashiir xabbadda afka gashaday oo isku dhuftay.
Anigu maalmahaa, qof ahaan marka aan xusuustayda dib ugu noqdo, waxaan joogay magaalada Diri-dhabe. Maalmahaas ayuun baanu ka soo baxnay Shirweynihii 5aad ee SNM oo Harar ku qabsoomay, Siilaanyana mar labaad muddo saddex sannadood ah loo doortay Guddoomiyaha SNM. Markaa Kal-fadhigii 1aad ee Golaha Dhexe ayaa ka furmayay Diri-dhabe. Markii aan maqlay in Mujaahid Bashiir Hargeysa ku shahiiday waxaan fadhiyay gurigii Ilaahay ha u naxariisto e’ Axmed Liibaan oo loo yaqaannay Gabax.
Galabtaa aan magaalada Diri-dhabe ku maqlayo in Mujahid Bashiir shahiiday, warku wuxu nagu soo gaadhay in uu baastoolad ku dagaallamay, in uu saddex ciidammadii cadowga ahaa toogtay, labadii xabbadood ee u soo hadhayna mid saaxiibkii ku dhuftay oo caloosha kala helay, tii u hadhsanaydna afka iskaga dhuftay, sidaana ku shahiiday. Kaas ayuu ahaa warkii ugu horreeyay ee aan ka maqlaa qaabkii uu u shahiiday Mujaahid Bashiir.
Intii halgankii hubeysnaa kaga shahiidday Mujaahid Bashiir iyo xigtadiisa dhow:
Halgankaa hubeysnaa ee dibuxoreynta qaran ee ay SNM horseedka ka ahayd, Mujaahid Bashiir iyo qoyskii uu ka tirsanaa si naf-hur leh ayay uga qayb-galeen. Bal hadda aan ka soo dhaqaaqno markii uu ka soo ambo-baxayay magaalada Jabuuti qaabkii loo soo abaabulay iyo intii ay halkaa iska soo raaceen, intii danbe ee ku darsantay iyo intii uu saamaynta tooska ah ku yeeshayba.
Abaabulka iyo ururinta Mujaahidiinta ee magaalada Jabuuti, waxa iska lahaa oo xil-qaaday, naxariistii Janno Ilaahay ha ka waraabiyo e’ Axmed Sheekh Cabdillaahi Ciise
oo ay walaalo ahaayeen Sheekh Muuse Sheekh Cabdillaahi Ciise oo si la yaab leh oo geesinnimo leh ula shaqeeyay Mujaahid Bashiir. Dadka kale ee qoyska ka tirsanaa, waxay kala ahaayeen:
1. Maxamed Ibraahin Xirsi (Bashiir): Shahiiday,
2. Yuusuf Ibraahin Xirsi: walaalkii oo shahiiday,
3. Cismaan Xasan Xirsi: Ina-adeerkii run ah oo shahiiday,
4. Cali Cbdiraxmaan Sheekh Cabdillaahi (gorgor): Bashir Ina-abtigii oo shahiiday,
5. Xaashi Aw Aadan Ciise: Abti oo shahiiday,
6. Maxamed Ibraahin Geeddi: Abti-labaad oo shahiiday,
7. Adan Ahmed Awale (Dalab): Abti-labaad oo shahiiday,
Waayihii Jabhadeed ee Xaruntii Dhexe ee SNM
Waayahaasi, haddii uu Hargeysa iyo dalka gudihiisa ka taagnaa xilligaas, malaha waxa fiicnaan lahayd in aynu wax aan sidaas u sii badnayn iska weydiinno xaaladda ag taallay ee ka oognayd xarumihii looga talinayay SNM. Innaga oo aan aad isu feeraarin bal aan isku koobno xaruntii maamulka ee Saldhiggii Raamaale (Diri-dhabe) oo markaa ahaa xarunta looga taliyo ama laga hoggaamiyo SNM.
Bishii Feeberweri, 1987kii, waxa ku qabsoomay magaalada Harar ama Adari sida loo yaqaanba Shirweynihii 5aad ee SNM. Wuxu qabsoomayaa Shirweynahaasi laba sannadood iyo lix bilood ka dib markii uu xidhmay Shirweynihii 4aad ee ka horreeyay oo ku qabsoomay magaalada Jigjiga Ogos, 1984kii. Shirweynahan 5aad wuxu muddo-dhaafay lix bilood oo sifo aan sharci ama dastuuri ahayn loo kordhiyay. Waxaan aamminsanahay in muddo-kordhinta ay Somaliland eedday ee ay dagaashay halkaas iyo maalmahaas soo bilaabmayso.
Sidii dhaqanka ama dastuurka SNM ahaa, markii uu Shirweynuhu dhammaaday, waxay Golihii Dhexe iyo Guddidii Fulintu u soo wareegeen magaalada Diri-dhabe oo ay ku galeen Kal-fadhigii 1aad ee Caadiga ahaa ee Golaha Dhexe ee SNM. Inta badan Kal-fadhiyada noocaas ahi shaqo kale ma qabtaan oo aan ahayn oggolaanshaha Guddida Fulinta oo uu soo bandhigo Guddoomiyaha Ururku.
Saddex dhacdo ayaa mudan in halkan hoosta laga xrriiqo:
Murankii iyo kala-qaybsanaantii SNM ragaadiyay oo ilaa maantadaa aynu joogno ifafaalaheedii sii muuqdo ayaa halkaas ka bilaabmaysa oo sannadkaas oo dhan socoday, waxaana si aan dhammaystirnayn loogu yar suuxinayaa Kal-fadhigii 1aad ee aan Caadiga ahayn ee Golaha Dhexe ee SNM oo Feeberweri, 1988ki ku qabsoomay magaalada Awaare. Waxay ahayd markii ugu horreysay intii ay SNM jirtay ee sidii ugu ballaadhnayd gurmad dibadeed ugu yimaaddo si loo maareeyo khilaaf riiqdiisii dheeraatay. Ergadaa Laamaha Dibadda ka timid waxaan ka sii xusuustaa: Cabdiraxmaan Axmed Cali, Ibraahin Meygaag Samatar, Ismaaciil Buubaa, Maxamed Cali Faarax iyo qaar badan oo kale. Ilaa dhowr iyo toban in ay ahaayeen ayaan u malaynayaa. Maareyntii la gaadhay waxa ka mid ahaa ama ugu mudnaaba in Guddidii Fulinta (Xoghayayaashii) oo lix ahaa loo kala qaybsaday saddex iyo saddex: Siilaanyo saddex ayuu soo magacaabay, Mucaaradkuna saddex ayay soo magacaabeen,
Waxa kale oo maalmahaas bilaabmaya isla markaana tis-qaadaya wada-hadalladii Soomaaliya iyo Itoobiya ee ku ibo-furmay Jabuuti, kuwas oo iyagana riiqdoodii dheeraatay maantana saamayntoodii ku yeeshay Somaliland ka-dib markii la bilaabay wada-hadallada mugdiga badani ku xeersan yahay ee lagula jiro Soomaaliya. SNM ahaan Octoobar 1984kii ayaa noogu horreysay Guddoomiyaha SNM oo soo hadal-qaada waan-wwan iyo wada-hadallo lala yeesho nidaamkii Soomaaliya markaa ka talinayay. Been ku hadli maayo haddii aan idhaahddo beryahaas ayaa noogu horreysay maqalka magaalada Istanbuul, ka dib markii Guddoomiye Siilaanyo Kal-fadhigaa Golaha Dhexe ka sheegay in ay tilifoon ku wada hadleeen Muuse Rabbiile oo markaa joogay Istanbuul.
Muranka iyo is-maandhaafka beryahaa taagnaa wuxu sababay in hoggaamiyayaal ciidan oo hal-doorka halganka ahaa la xidh-xidho, mowduucaas oo qudhiisu xuddun u ahaa waan-waantii laga dhex waday Muxaafidka iyo Mucaaradka,
Aniga oo aad uga xun in aan sheekadan xadantada iyo xanuunkaba leh idiin soo gaabiyo, waxan hadalkaygan ku soo gunaanadayaa in aan akhristayaasha u sheego in muranka iyo khilaafka hadhi waayay ee SNM ragaadiyay uu xilliga bilaabmay kana dhashay is-mari-waagii Muxaafidka iyo Mucaaradka. Haddii aan intas u sii dhaaf is-idhaahdo, mowduuceennii udub-dhexaadka sheekadaeennan u ahaa ayaynu ka ambanaynaa. Raalli ha la ahaado, haddii Eebe idmo fursado kale ayaymu isu heli doonnaa.
Dhaqankii, dhalankii iyo dhiirranaantii Mujaahid Bashiir
Maxamed Ibraahin Xirsi Kaahin oo 1984kii markii uu SNM ku soo biiray qaatay magac-halgameedka ah Mujaahid Bashiir, wuxu ahaa ninkaas aanu idiin ka soo sheekaynay taariikh-nololeedkiisa oo kooban. Markii uu hawl-gallada ka bilaabay Saldhiggii SNM ee Dibiile ee uu sida tooska ugaga soo biiray halganka, wuxu isla markiiba noqday Taliye-xigeenka Sahanka Gudaha. Wuxu ka hoos shaqaynayay Mujaahid Raage-bidaar oo ahaa Taliyaha Sahanka Gudaha. Waxay ahaayeen koox dhan oo dhowr iyo soddon nin ku dhawaanaya. Xataa ciidankii Qabri-bayax duleedkiisa lagu tababari jiray iyaga ayaa madax u ahaa.
Mujaahid Bashiir iyo Raage-bidaarba marka ay la noqoto ama ay doonaan ayay Hargeysa soo geli jireen iyaga oo mar cadayleyaal ah, mar iyaga oo dawarsanaya maxaa yeelay waxay yaqaanneen xirfado badan oo ay adeegsadaan. Waxay awood iyo mowhibad la yaab leh u lahaayeen in ay masilaan ama jilaanba qofka ay rabaan. Sida ay noo sheegeen Mujaahidiintii xog-ogaalka ahayd, Mujaahid Bashiir qofka uu doono ayuu meteli karaayey. Waxa la ii sheegay in mararka uu wax metalayo ay aad isugu ekaayeen jilaagii weynaa ee hal-abuurka iyo maadeeyahaba ahaa ee Maxamed Cumar, Huuryo, naxariistii Janno Ilaahay ha ka waraabiyo e’.
Xilliyada qaarkood, wuxu magaalada soo geli jiray, isaga oo habar masilaya oo Huuryo iska dhigaya oo dheer oo siigo leh ayuu soo galaayey magaalada oo islaan caanolay ah oo meel taagan oo kale ah. Waxyaabaha kale ee uu aad uga faa’iidaystay waxa ka mid ahaa lahjadda Xamariga ah oo uu si fiican u yaqaannay oo mararka uu doono uu iska dhigi jiray nin reer koonfureed ah.
Mujaahid Bashiir, ma uu ahayn nin wakhtiga ama waxyaabo kale ay dhibayeen oo ay walbahaar iyo walaacba ku hayeen.
Muuse Biixi oo Mujaahid Bashiir ka sheekaynayay, wuxu yidhi:
“Wuxu ahaa nin askarinnimo u dhashay. Dhowr jeer ayaanu wada sheekaysannay oo waxaanu u tegi jirnay ninkan Cumar Sheekh la yidhaahdo walaalkiisii ka waynaa Sheekh Muuse Sheekh Cabdilaahi gurigiisa oo reer miyi ahaa oo Durya kaga beegan dhinaca koonfur bari deggenaa. Adhi ayuu noo qali jiray oo aan u tagi jirnay oo marka uu soo noqdaba sidii baanasho oo kale uu odhan jiray waar ina keena bal maanta abtiyaashay ayaan u tageyaaye. Saacado badan ayaanu halkaas ku wada qaadan jirnay. Ninkaasi waxa ay dadku ka sheekeeyaan kama uu sheekayn jirin. Maanta oo dhan nolol kama uu sheekayn jirin, mustaqbal iyo raaxo midnaba kama uu sheekayn jirin. Ninkaasi afar iyo labaatanka saacadoodba wuxu kaaga sheekaynayaa waa hawl-gal oo sidaas iyo taa ha la sameeyo ah, wuxu ahaa shaqo ahaan nin yaqaanna farsamada laydhka, waana tan waayirrada la jiido. Markaa ma uu qori jirin far isku xidhiidhsan marka uu wax kuu sharxaayo ama uu ku leeyahay qorshe ayaan sameeyay. Mararka uu wax kuu sheegayo sida waayirrada oo kale ayuu fallaadho dhinac walba isku dhaafsan uu kuugu tilmaamayay.”
Inta badan Mujaahid Bashiir, Taliye Muuse Biixi uma uu keeni jirin warbixin. Bal se wuxu had iyo jeer ka dhaadhicin jiray fikrad oo inta badan isaga ayaa Taliska ku habi jiray fikradaha. Muuse Biixi hadba fikradda uu Bashiir u keeno wuxu u gudbin jiray oo uu la wadaagi jiray Shahiid Aadan Sheekh Maxamed, Aadan-shiine iyo Guddoomiyaha SNM oo ahaa Axmed Siilaanyo, isaga oo ka cararayay in uu hal-gallada qaarkood ku eedoobo.
Mujaahid Bashiir dabeecaddiisu waxay ahayd mar kasta oo aad wax weydiiso, wuxu kuu sheegayaa qorshe dagaal, mar kasta wuxu kuu sheegayaa yoolka weyn ee la hiigsanayo. Wuxu aad uga soo hor jeeday una dhibsan jiray dagaalladan fool-ka-foolka ah (conventional) oo uu odhan jiray dad badan ayaa inagaga dhimanaya.
Dooddiisu waxay u badnayd haddii aynaan cadowga gudaha ku cabsi-gelin, xuduudda iyo dibadda iskaga celin kari meynno. Wuxu ku doodi jiray cadowgu dibadda waa in uu ku baqaa, gudahana ku argaggaxaa.
Muuse Biixi oo hadalka sii wataa, wuxu intii hore ku kabay:
“….ninkaas wuxu ahaa nin u dhashay millaterinnimada ee weliba ah kooxahan war- doonka ee had iyo goor ciidammada ka horreeya ee meelaha adag loo diro oo sida kuwa ‘Gamma iyo Alpha’. Haddii uu tabobar heli lahaa noocaas wareerka ah ayuu noqon lahaa waayo maskaxdiisa ayaa taas u samaysnayd. Ninkaasi, weligii immika waa uu shahiiday oo ma ammaanayee, xaalad kasta oo timaadda ninkaas oo baahi ii sheegta ma aan arag. Xataa waan lugaynayaa oo kabo ayaan u baahanahay i muu odhan. In aad u timaaddo oo aad tidhaahdo surwaalkaas beddel oo kabaha noocaas ah ayaa loo baahan yahay uun moyaan e’, isaga oo hawl-gelaaya dacas iyo kabaha kabo u adag muu kala jeclayn. Ilaahay ha u naxariisto e’, waxaan ka xumahay oo aan doonayaa in aan sheego Cismaan Xasan Xirsi oo Ina-adeerkii ahaa waa la dilay oo isaga dartii ayaa loo dilay oo afar mar la wada dilay ayey ahaayeen isaga iyo Ina-oogle iyo. Yuusuf Ibraahin Xirsi oo walaalkii ahaa in badan ayaan dagaalka ka reebay is-na dagaalkii ugu danbeeyey ee Hargeysa lagu galay ayaa uu ku shahiiday, tiraba afar shan jeer ayaan ka soo reebi jiray dagaalka, waayo odeygii tabcaan ayaa uu ahaa aabahood, ninkii u shaqaynaayey waa uu dhintay, ka hadhayna waa curyaan, waa laangadhe oo hore ayaan u ogaa reerka oo saddex walaalo ah ayaa ka dhintay Cismaan,Yuusuf iyo Bashiir oo Cismaan oo hortii dhintay oo dagaalkii Axmed Aadan loo dilay, Yuusuf oo 89kii Hargeysa ku shahiiday oo dee odeygii iyo islaantii oo iska goblan ah oo Abaadir u hadhay, ayaan aad uga xumahay. “
Dadka kale ee ka sheekeeyay dhaqammadii iyo dhiirranaantii la yaabka lahayd ee Mujaahid Bashiir waxa kale oo ka mid ahaa walaalkii oo loo yaqaanno saddex magac oo kala ah: Cabdiqani, Cabdikariim iyo Abaadirba. Waa nin lug ka ah naafo oo bakoorad raas-bi-raas ah cuskada. Waa xaas, waxaanu deggen yahay Gebilay.
Aniga oo uga mahad-celinaya Mujaahid Abaadirna taakuleynta hodanka ah ee uu ka geystay ururinta iyo qoraalka taariikh-nololeedka Shahiid Mujaahid Bashiir oo ah walaalkii, waxaan jeclahay in aan halkan ku xuso in uu Abaadir qoraallo taariikhiya oo suganti (document) ah iyo qoraallo uu qorayba noogu deeqay.
Mujaahid Abaadir, mar uu ka warramayay booqashooyinkii walaalkii Bashiir ugu iman jiray gurigooda isaga oo ka iman jiray saldhigyadi SNM, wuxu yidhi:
“Markii ugu horraysay ee uu noo yimid wuxu xaafadda joogay saddex maalmood. Waxaanu kala kulannay dhaqammo cajiib ahaa oo aniga qalbigayga ku cuslaa weligayna aanan samayn kareen.”
Oo maxaa ka mid ahaa dhaqammadaas la yaabka lehaa ee Mujaahid Abaadir labada dhaban gacmihii ku engegeen. Waxaanu Abaadir ku deexday:
“Warqad ayuu maalin iigu dhiibay Sarkaal aanu qaraabo ahayn oo kabtan ahaa jaarna aanu ahayn. Wuxu yidhi warqaddaa ninkaa u gee. Hadda Gebilay ayaanu joognaa. Markii aan dibadda ula baxay ayaan warqaddii akhriyay, waxaana ku qornaa: ‘Waa Maxamed Ibraahin Xirsi. Ma is-arki karnaa.’ Aad baan warqaddii ula yaabay. Aniga oo aan ninkii warqaddii u geyn ayaan dhexda ka soo noqday.
Walaalkay Bashiir ayaan dib ugu noqday. Aniga oo aan hadalba u furin ayuu igu qab-qabtay: ‘Muxuu ku yidhi?’ Waxaan ugu jawaabay: ‘Maya ayuu igu yidhi.’ Inta uu aad u xanaaqay ayuu yidhi uma aad geyn. Maxaad ugu geyn wayday? Waxaan ku idhi: ‘Waar ninkani waa ninkaa sarkaalka ah oo wuu ina sheegi doonaa. Waar ninkan oo kale la iskuma sheego e’ walaal arrinkaa inaga daa.’ Dood badan ilama uu gelin e’, wuxu igu yidhi: ‘Ku noqo oo u gee.’ ‘Waa yahay ayaan ku idhi.’
Su’aal ayaan weydiiyay intii aanan u kicitimin xaggii sarkaalka. Waxaan ku idhi walaalkay Bashiir: ‘Hadii uu igu yidhaa halkee ayuu joogaa maxaan ku idhaahdaa?’ ‘Guriga ayuu joogaa ku dheh,’ ayuu igu yidhi. Tanaaba tii hore igaga darnayd. Aniga naftayda calool-adayg kama maqnayn, bal se waxaan filan karayay iyo wuxuu qiyaasayay ayaa aad u kala haab fogaa.’
Abaadir sheekadii ha inoo sii wado, bal halka ay ku biyo-shubato:
“Sarkaalkan oo ka yimid koonfur toddobaad fasaxana ku joogay, gurigiisii ayaan ugu tegay. Inta aan u galay ayaan salaamay. Si fiican oo soo dhawen leh ayuu salaantii iiga qaaday, reerkana aad ayuu iiga wareystay. Annaga oo sheekadii reerkayaga ku jirna ayaan warqaddii uu Bashiir soo qoray u dhiibay. Wuu anfariiray… wuu yaxyaxay…..dhabanno-hays ayay ku noqotay. Inta uu is-hayn kari waayay, ayuu si cadho badani ka muuqatoo iigu yidhi: ‘Xagguu joogaa.'”
Mujaahid Abaadir bal hadda ha inoo sii gundhiyo sheekadan ma-hadhada ku noqotay, waxaanu intaa hore ku daray:
“Aniga oo ay naftuba igu sii dabo yar tahay, ayaan ugu jawaabay: ‘Xaafadda.’ Sarkaalkii aan warqadda u geeyay inta uu aad u naxay, ayuu dirir ay naxariisi ku jirto ii deddejiyay, waxaanu yidhi: ‘Waar ninkani hadduu lafiihiisa ka quustay oo uu nacay, waxaad ku tidhaahdaa ha galaafan odeygan iyo islaantan cadka ah ee ku noqo meeshaadi, xaafaddana deg-deg uga bax.’ Waa wixii aan rajaynayay weji-gabaxa noocan ahi iyo ku ka daraniba. Bashiir ayaan ku soo noqday iyo xaafaddii waanan u warramay. Wax hadal ah wuxu igu soo celiyay: ‘Ma sidaas ayuu ku yidhi.’ Ilaahay uun baa maalin kale noo dhigtay, bal se taasna Bashiir waanu isla soo marnay.”
Ma dha-dhawa. Weli waxa inoo socda oo ma-hadhooyinkiisii inooga muddakaroonaya, Mujaahid Abaadir oo ay Mujaahid Bashiir walaalo ahaayeen. Waa kan misana gufaaco kale soo rogay, waxaanu markan ku deexday:
“Maalin ayuu aabbo aad uga waraystay dadka aanu jarka nahay. Habeen habeennadaa ka mid ahaa ayuu naga baxay. Wuxu u galay nin aanu jaar ahayn oo Isbatoore (Xadhigle) taarwale ah ahaa. Qoys ahaan waanu isku xidhnayn oo waa uu ogaa in uu Mujaahid Bashiir tallowsan yahay oo maqan yahay. Runtii wuxu ahaa nin aad u necbaa millateriga iyo nidaamka dawladeed ee uu ka midka ahaaba. Mar walba aabbo ayuu u sheegi jiray goldaloolooyinka ka muuqda xerada iyo sida loo cadaadiyo. Ninkaas, waxa la odhan jiray Ismaciil Jibriil, beryihii danbena waa uu dhintay.”
Wuxu sheekadan xaradhaamada lahayd, Mujaahid Abaadir ku soo gunaanaday:
“Xadhigle Ismaaciil, markii uu gurigiisa ugu galayba waa uu isu sheegay. Aad iyo aad ayay habeenkii oo dhan u wada sheekaysanayeen. Ma ay sahlanayn in nin ciidanka millateriga Soomaaliya ka tirsan aad is aragtaan adiga oo SNM ka tirsan kana yimid oo hawlo u socday. Qof dun wanaagsan oo waddaniya ayay taasi ka suurtoobaysay, waanay jireen dad caynkaas ahi haba yaraadaan e’.”
Hadda halka aynu joognaa ee sheekadan la yabka leh aynu ku durduuranaynaa waa Gebilay iyo xaafaddii ay deggenaayeen reer Ibraahin Xirsi. Mowduuca sheekadu waa Mujaahid Bashiir iyo dhaqammadiisii halgameed. Waxa taxanaha sheekada inoo daaddihinaya Mujaahid Abaadir oo aynu gaaxdiisii halgameed maalaynaa.
Maah-maahdii Soomaaliyeed, ayaa ahayd: “Lababa isa saaray oo laba tagoogood is-ma saarin.”
Bal hadda u fiirsada sida ay xaaladdani halista ugu tahay qoyskan dhan iyo dadka ku xidhanba, iyo sida deggenaanshaha leh ee ay iyaguna iskaga daansho-daanshoonayaan. Muran iyo dood ayay iskaga jiraanba.
Bal hadda Mujaahid Abaadir, godollo kale oo ma-hadhadhooyinkii uu walaalkii Bashiir kala kulmay ah ha inoo sii mariyo, waxaanu yidhi:
“Habeen habeennadaa ka mid ahaa ayuu aniga iyo inan kale oo iga weynaa oo aanu walaalo ahayn noo yeedhay. Wuxu nooga sheekeeyay sida loo qoro waraaqo aan cid kale fahmi karin. Waxaanu tusnay qoraal af-soomaali ahaa oo aanu annagu ikhtraacnay kuna salaysnaa BTJ-dii oo aanu kala beddelnay, laakiin shaqallada sidoodii ayaanu u isticmaalaynay. Hal xaraf ayaa saa’ida R-da ayaa caadi ka dhignay.
B T J X K H D R S SH D H—- C G F Q K L M N W H Y
C G F Q K L M N W H Y —–B T J X KH D R S SH DH
“Af-soomaali aanu sidaa u kala-beddelnay ayaanu tusnay oo aanu waraaqo annaga oo keliyi aanu fahmaynno aan ku qori jirnay. Wuxuu nagu yidhi: ‘Waxa muhiim ah haddiiba askari inta uu ku baadho uu warqad kaa helo, in aan warqaddaa loo aqoonsan in ay sir tahay. Haddiiba warqaddaa loo aqoonsado in ay sir tahay waa la ogaan karayaa, marka ay ugu yar tahay waa lagu tuhmayaa, waana lagu xidhayaa. Sidaa daraaddeed, warqadaha aynu is-dhaafsanayno waxaynu u qorayna sidan: xerada millaterigu waa ayeeyo, askartuna waa caruurteedii, boolisku waa bahdii kale ee ayeeyo. ‘Sidaas ayaad warqadaha u soo qoryasaan,’ ayuu nagu yidhi.
Habeenkii u dambeeyay ee bixitaankiisa ayaa waxa loo soo iibiyay kalluun badan iyo tobaneeyo xabbo oo roodhi ah, sidaas ayaanu nooga anba-baxay.
Markanna, waa Mujaahid Abaadir oo ka sheekaynaya hilimmadii uu soo mari jiray Mujaahid Bashiir kolka uu gudaha soo gelayo, waxaanu yidhi:
“Xilliyada ama mararka uu gudaha soo gelayo inta badan wuxu soo mari jiray markuu dalka soo gelayo iyo markuu ka sii baxayaba Carrada malko/Marda. Waa lafta-boqor barigeeda miyiga oo ku dhow Lafta-boqor, halkaas oo abtigii Cabdiraxmaan Sheekh deggenaa. Bashiir waxa aad ula shaqayn jiray Ilaahay ha u naxariisto e’ Muuse Sheekh Cabdillaahi Ciise. Waa abtigayo run ahaa oo calool adkaa sheekhna ahaa. Wuxu ahaa ninka aad is-odhanaysay waa ninkuu ka raacay dhiirranaanta iyo geesinnimada. Sheekh Muuse, wuxu deggenaa Guluc halkaas oo iyaga oo qoryahooda sita ay u iman jireen. Wuxu Sheekh Muuse u soo qaadi jiray hubka iyo miinooyinka ay dalka gudihiisa gelinayaan isaga oo si badheedh ah ugu soo rari jiray Awr uu lahaa.”
Galaa-baxan Mujaahid Bashiir ee dalka Abaadir wuxu ku soo khatimay:
“Walaalkay Bashiir, intii uu uu SNM-ta ku jiray dhowr jeer ayuu xaafaddayada Gebilay noogu yimid, annaga oo deggenaan jirnay xerada millaterigu deggen yahay meel jago- buldhuq la yidhaa, taas oo uu Bashiir noo iibiyay intii aanu tallaabin.”
Abaadir oo aanay sheekooyinka walaalkii ka dhammaan oo hadba godol soo cusboonaysiinaya, ayaa wuxu xusuustay sheekadan kale, ka dib markii walaalkii Mujaahid Bashiir shahiiday. Markanna wuxu ku deexday:
“Intii uu shahiiday ka-dib ayaan abtigay Sheekh Muuse ku idhi: ‘Abti bal ninkaa ka waran calool-adayggiisii.’ Wuu ilko-caddeeyay, waxaanu igu yidhi: ‘Abti aniga ayaa ka yaabi jiray oo la yax-yixi jiray.’ Qisuu iiga sheekeeyay. Wuxu yidhi: ‘Maalin maalmaha ka mid ahayd ayaa annaga oo soconna Caraancarka Allaydabay korkeeda, awrka aanu wadannana uu miino la ciir-ciirayo is-na uu I ag socdo ayaa waxa nagu soo baxay 15 askari, waanay na joojiyeen. Nimanku waa jaad doon-doon. Markii aan sidaa ugu baxnay nimanka, Bashiir oo iga danbeeyay ayaan maqlayay qoriga uu ammaanka ka jaray. Hoos inta uu ii la hadlay ayuu igu yidhi abti ha ka werwerin intan aniga ayaa ku filan e’. Su’aalo badan ayay na waydiiyeen oo ay ka mid ahaayeen: maxaad siddaan, ninkani muxuu ahaa iyo qaar kale oo badan. Bal se nin ciidankaa ka mid ahaa ayaa indheer-garad iyo waayo-aragba u muuqday. Wuxu ahaa nin rarka wax ka yaqaannay. Wuxu ydhi: ‘Awrkani ma sido wax culus oo ka muuqda, culaysna wuu la tiicayaa maxaad siddaan.’ Annaga oo isla kadeedan, fadhiisina uu i leeyahay ayay ku soo baxeen dameero jaad sidaa. Kuwii baa Ilaahay nagu furtay oo ay ku wada yaaceen.”
Abtigii, wuxu sheekadan gaaban ku soo gunaanaday:
“Markii ay naga tegeen ayaan shucuurtiisa la yaabay oo waaba iska sidiisii. Waa maalinta qudh ah ee aan naxay ee aan is-idhi maanta galbate.”
Looga-qaateenkii hawl-galladan iyo sheekooyinka la yaabka leh ee la xidhiidha iga warramayay, waxay ii sheegeen in tiraba ilaa siddeed jeer ama sagaal jeer ay gudaha uga suurto-geli waayeen yoolalkii ay doonayeen. Suurto-gal-la’aantaasi waxay beertay shakiyo mararka qaarkood la isku maan-dhaafi jiray
Shakiyadaas waxa ka dhashay dacaayado, iyada oo ay kolkeeda horeba jabhadnimadu iska shakiyo badan tahay oo inta badan ay baci kugu xidhmayso. Sida aanu xogta ku hellay, hawlgalka ugu danbeeyey ee ay ku soo baxayaan Bashiir, Nuur Muhindis iyo Cismaan Awr-liqe saddexdoodu, Aadan Shiine, Cali-Gurey iyo Muuse Biixi derged yar oo Dibiile ku taallay ayaa muran badina ku dhec maray. Aadan-shiine oo arrimahan aad ugu canaantay Taliskii Aagga, ayaa ku andacooday in la joojiyo hawlahan, sahammadan iyo hawl-galladoodaba. Wuxu ku cel-celiyay in guul-darro lagala kulmi doono.
Sida ay looga-qaateenku noo sheegeen Mujaahid Bashiir ayaa markaa codsaday oo ku adkaystay in mar kale fursad la siiyo. Cismaan Awrliqe oo markaa magaalada ka soo baxay ayaa isagunana warka xooggiisa keenay. Mujaahid Bashiir, Nuur Muhindis iyo Cismaan Awr-liqe sidaas ayay ku soo ambo-baxeen.
Mujaahid Bashiir, dadkii sida la-yaabka iyo naf-hurkaba ula halgamay ee inta badan hawlaha la fulin jiray waxa ugu mudnaa abtigii Sheekh Muuse. Wuxu ahaa nin beeraley ah oo isla markaana xoolo-dhaqato ahaa oo weliba geelna lahaa. Galbeedka ayuu ku dhaqnaa oo aan inta badan loo aanayn geel-dhaqashada. Sheekh Muuse, Ilaahay naxariistii Janno ha ka waraabiyo e’, waa uu dhintay. Haddaba si aanu wax uga ogaanno kaalintii uu Sheekh Muuse kaga jiray halgankii hubeysnaa ee dibuxoreynta qaran ee ay SNM horseedka ka ahayd, waxaanu la xidhiidhnay oo aanu ka wareysannay Xaaskiisa, Aamina Xasan Suldaan oo Hargeysa deggen.
Iyaduba, Mujaahidiinta nafta iyo waqtigaba hurtay ayay ka mid ahayd e’, waxaanu ku booqannay gurigeeda oo Gol-janno ku yaalla, 27/9/2015ka, gelinkii danbe. Iyada oo si wanaagsan noo soo dhaweysay, waxay si kal iyo lkaab ah noogu duubtay wixii ay ka ogeyd Mujaahid Bashiir iyo Sheekh Muuse, waxaanay ku bilowday:
“Horta inta uu Mujaahid Bashiir noo iman jiray waa ay badnayd, waxaan immika tiro ku soo koobi karona ma aha. Mararka uu noo yimaaddo wuxu nala joogi jiray habeen, laba ama saddex habeenba. Wax ka badan nalama uu joogi jirin, laakiin nagama uu raagi jirin oo si deg-deg ah ayuu noogu soo noqon jiray.”
Sida aan ka soo xigtay, Muuse Biixi oo ii sheegay in uu inta badan booqashooyinkaa abtigii ku wehelin jiray, Mujaahid Bashiir inta badan waa loo loogi jiray oo neef ayaa loo qali jiray sidii qof la baananayo oo kale.
Mujaahid Aammina iyo xusuusteedii aan ku noqonno, waxaanay intaa hore raacisay:
“Marka uu noo yimaaddo reeraha aanu la naallay waxba ma ay dhibsan jirin, waanay garanayeen, reer Sheekh ahaanna waa ay ixtiraami jireen oo sheekh Cabdillaahi Ciise oo Sheekh Muuse aabbihii ahaa ayay si weyn uga danbeyn jireen. Sidaa daraaddeed ma ay dhibsan jirin oo dhibaato badan kama ay sheegan jirin, se mar qudh ah ayay nagu yidhaahdeen sida uu ninkani u socdaa waa qalad ee aad adna Sheekh Muusow ula socotaa, ileyn cabsi badan ayaa jirtay e’. Kolka la imanayo Alley-badey oo aad noogu dhaweyd, ayaa laga baqan jiray amaba se kolka la tegayo ayaa laga cabsan jiray in lagu qabsado. Baahida magaalada loo qabo ayaa mar walba taagnayd e’. Xusuustayda hal mar ayaa reerka cabashadaasi ka timid oo aan mar labaad lahayn.”
Bal hadda immikana Mujaahid Aamina ha inooga warranto halkii ay deggenaayeen iyo xoolaha ay dhaqan jireen, waxaanay tidhi:
“Annagu, waxaanu degganayn xagga xadka ka shisheysa ee Dibiile u dhow. Deegaan ahaan, waxaanu u dhexaynay Dibiile, Harta Sheekha iyo Durya. Meel Guluc la yidhaahdo ayaanu deggenayn. Xoolo iyo beeraba waanu lahayn. Geelii Sheekh Cabdillaahi wixii ka hadhayna waa ay noo joogeen. Tiro ahaan geelu ilaa soddomeeyo ayuu ahaa.”
Jilayaasha ma-hadhadan aynu taariikh ahaan u diiwaan-gelinayno, waxa ka mid ahaa Awr ma-naste ma-daale ahaa oo muddo laba sannadood ah aan inta badan heeryadaba lagu furin. Wuxu ahaa Awr halgamaa ah oo in badan ka adeegay halgankii hubeysnaa ee dibuxoreynta qaran ee SNM horseedka ka ahayd. Awrkaasi wuxu ka mid ahaa arrimihii aanu ka codsannay Mujaahid Aamina in ay waxoogaa nooga muddaakarooto, waxaanay tidhi:
“Waxa jiray Awr ay adeegsan jireen inta badan. Awrka ay adeegsan jireen geela ayuu ka dhashay oo hashii dhashayba geela ayey ku jirtay. Lama soo iibsan, hasha awrkaas dhashayna waxa magaceeda la odhan jirayTaamur. Sidaas Awrkuna kula baxay Ina-taammur. Anigu immika tiro kuma garanaayo inta jeer ee ay rareen laakiin laba sannadood iyo dheeraad ayaa mar walba la raran jiray. Mujaahid Bashiir iyo Sheekh Muuse, waxay inta badan ku rari jireen Awrkaas hub iyo miino. Waxay ku rari jireen wax sida ubbooyinka oo kale u samaysnaa. Miinooyinkana marka hore Dibiile ayaa Awrka lagaga soo qaadi jiray, marka waxaanu lahayn laba guri Soomaali, mid ayaana lagu uruurin jiray, markaas ayaa haddana la soo tallaabin jiray oo Awrka lagu soo guri jiray.”
Awrkaas Mujaahidka ahaa ee Ina-taamurna sidaas ayaad ku diiwaan-gelinaysaan kaalintii xurmada lahayd ee uu ka soo qaatay halgankii hubeysnaa ee dibuxoreynta qaran ee ay SNM horseedka ka ahayd. Markii danbe Awrkaas Ina-taammur rarkii iyo culayskii badnaa ayuu ku garbo-beelay oo nabarro ku yeeshay guudka, gaar ahaan kuruska oo uu beryihii danbena u bakhtiyay. Qaantaasina waa ay inagu maqan tahay, Ina-taammur sidaas ayuu taariikhda ku gelayaa.
Aynu dib ugu noqonno Mujaahid Marwo Aamina iyo xusuusteedii, waxaanay tidhi:
“Awrka Ina-taammur mar qudha ayay adeegsan jireen oo marka la keeno Ceel-ginniiseed ama Dhagax-madoobe agagaarkiisa. Mararkaas oo kale muddo ayuu socon jiray, halkaasna waad garan kartaa inta ay jirto iyo halka la keenaayo wakhtiga ay qaadan karto oo wax markiiba lagu soo noqon karo ma ay ahayn. Sheekh Muuse, mar walba waa uu raaci jiray ama Awrka ha ka xaystaan amaba keli ha u socdaan e’. Mar kasta is-na waa uu raaci jiray, waana ay wada socon jireen oo waxoogaa ayay naga maqnaan jireen, annaga oo u baahan oo miyi la joogo, la iskana rafaadsan yahay ayay naga tagi jireen Awrkana naga ka xaysan jireen. Awr kalena geela kumay jirin markaa geel waa uu joogay e’ laakiin awr marka laga furo si fiican loo raran karo oo marka laga furo aan cabaadayn oo xoog weyn oo meel kasta kuu mari karaya ayuu awrkaasi ahaa, se markii danbe awrkaasi sidii loo raraayay ayay garbihii iyo kuruskiiba xanuuneen oo uu markii danbena ku dhintay.”
Bal ka warrama dee Ina-taammur. Halgankaa uu gartay, waxa jirtay in badan oo aadame ah oo garan weyday. Ina-taammur xataa wuxu iska illoobay xilalkii qoyska ka saarnaa oo dan qaran iyo halgankii hubeysnaa ayuu u anbo-baxay. Miyaanay ahayn isaga iyo qayrkiiba in aynu taallooyin u taagno.
Mujaahid, Marwo Aamina oo sheekadan oo inoo kalwinaysay, waxay ku soo gunaanadday:
“Markaa reerku wuxu ahaa reer aad iskugu dhow oo reer Sheekh oo dhan ayaa isku xidhnaa kuna xidhnaa SNM-ta, dee Maxamedna (Bashiir) nin reer Sheekha ayuu ahaa. Annagu inta badan Maxamed ayaanu u naqaanay oo Bashiir markii danbe ayaa loo bixiyey e’ in kasta oo magaca Bashiir ahaa magacii uu halkaas ku joogay, SNMta reer Sheekh Cabdillaahi Ciise oo dhan baa ku xidhnaa oo waxa jiray ilma-Cabdiraxmaan Sheekh, Gorgor baa is-na jiray, inankan ay Bashiir walaalaha ahaayeen ayaa is-na jiray oo Yuusuf la odhan jiray oo is-na shahiiday. Marka waxay ahaayeen dad badan oo ilaa Axmed Sheekh Cabdilaahi oo Jabuuti joogay, raganna soo diri jiray oo xaggaas soo marin jiray illaa Axmed Nuurkaas, waxay ahaayeen dad badan oo SNMta ka wada mid ah oo ku wada xidhan iyaguna isu xidhan, reerkaasna inta badan dadkii u ban-baxay ayay kow u ahaayeen.”
Mujaahid Marwo Aamina Xasan Suldaan, aynu aad ugu mahad-celinno xogta togan ee ay inaga siisay intii ay ka ogeyd Mujaahid Bashiir, Sheekh Muuse iyo Awrkoodii Ina-taammur ee mar walba ku lammaanaa halgankiina ku garbo-beelay ee markii danbena sidii ku dhintay.
Xogogaalka kale ee looga-qaateenka ah ee aanu ka wareysannay Mujaahid Bashiir iyo sooyaalkiisii halgameed, waxa ka mid ah Mujaahid Ismaaciil Cabdi Tani, waxaanu ku bilaabay xog-warrankiisii:
“Markii hore Sucuudiga ayaan ka soo noqday, Jabuuti ayaan imid ku-sinnaan aakhirkii Diisambar 1984kii. Aniga oo goor makhrib ah maraya Xaafadda Shanaad, ayaanu ninkii Cumar Aadan Cawaale ku kulannay oo aanu aad isku naqaannay oo aanu saaxiib nahay. Qaad yar ayuu sitay, waxaanan weydiiyay halka uu ku socday. Wuxu igu yidhi: ‘Waxaynu u tegaynaa nin aanu Ilma-abti nahay oo meel halkana deggen. Halkaas ayuu Cumar Aadan Cawaale isku kaayo baray Maxamed Ibraahim Xirsi oo beryihii danbe la baxay ama loo yaqaannayba Mujaahid Bashiir. Waxa kale oo maalintaa la joogay Yaxye Cabdiraxmaan Sheekh Cabdillaahi oo ay Ilmo-abti ahaayeen. Halkii ayaanu ku sheekaysannay. Waa xilli ku beegnaa Guda-galkii gudaha ee 1984kii. Sheekadii dagaalladii buuraleyda ee berigaas ayaa la soo qaaday.
Markaas ayuu yidhi suuqa waxaas lagagama sheekeeyo e’, ninkii doonayaa ha tago oo kolkaaba qiiro ayaa ku jirtay kolkaas ayaan yaabay illeyn aniguna xaggan ayaan u socdaay e’. Waanu ballannay, ka-dibna maalin danbe ayaan anigu keligay goostay in aan u tago ‘Ambassadorkii’ Itoobiya. Aniga oo safaaraddii jooga oo ay foom-yar iga buuxinayaan ayay saddexdoodii oo wada socdaa ay noo soo galeen. Waa ka igu yidhi ma i garanaysaa aniguna haa ayaan ku idhi. Ka-dib markii aan waraaqahaygii soo qaatay, ayaan ku idhi waa inoo suuqa. Waan gartay in ay baxayaan, ka-dibna anigu diyaarad ayaan raacay iyaguna Tareenka ayay soo raaceen.
Waxaanu haddana iskugu nimid Diri-dhabe, halkaas ayaanu Diri-dhabe ka baxnay oo aanu Awaare tagnay. Urur tobnaad la odhan jiray oo Ururkii dhibbooga ahaa ah ayaaba uu Taliye ka noqday. Ka-dib Raage iyo qolooyin kale ayaa yimid, aniguna waan iskaga noqday xafiiskan ciidanka iyo tirada iyo waxaas. Mahdi Cali Faarax, Taliyaha dhibbooga Awaare ayuu ahaa. Markaa hawl-gal Balli-cabbane ahaa ayuu Muuse Biixi ka codsaday Mahdi in uu 150 Mujaahid uu keeno, markaa is-na kuwaas ayuu ku jiray uu Mahdi soo diray, aniguna Dibiile ayaan imid kolkaas.”
Intaa ka dib maxaa dhacay? Waa kan Ismaaciil Cabdi Taani oo sheekadiisii soo gunaanadayaa:
“Markii uu hawl-galkaas Bali Cabbane uu dhammaaday, ayaan isaga, Raage, nin Fooxle la yidhaahdo iyo nin Cali sandheere la yidhaahdo aan Afartaas idhi Mahdiyoow ii soo reeb, sahanbaan galaynaayee, waayo waxaan Awaare ku soo ogaaday dagaalkii 84kii in xaggan Galbeedka ay ka dhacday, dabadeedna markaas ayaan idhi sahanbaan galeyaa si aan dalka u kala baranno dadkii kalena aan hadhow uga faa’ideeyno, dabadeedna siddii ayaa afartii iigu soo reebeen, halkaas ayaanu ka baxnay oo buuralaydii ilaa Agabar iyo meeshaas ayaanu soo marnay, ka dib markii aan soo noqonay afartayadaasi ayaan waxa aan meesha ka sameeyey koox la yidhaahdo Sahanka.
Bashiir waxa uu ahaa nin aad u firfircoon oo qiiro wadaniyadeed ay ku jirtay, halgankuna ku dheera ayaan ku bartay.”
Ka-baxii dalka ee Reer Ibraahin Xirsi
Qoraalkan soo socda oo aan ku leeyahay tifaf-tirka ama quraaridda oo keliya, waxa inoo kalwinaya Mujaahid Abaadir oo aan ka martiyay xogta qoyska inteeda ugu badan, waxaanu ku bilaabayaa:
“Ka-hor intii aanu dhiman Bashiir dhowr jeer ayaa aabbahayo looga yeedhay xarunta ‘CID-da’ degmada Gebilay, ka dib markii odey caaqil noo ahaa u sheegay in wiil nagaga maqan yahay SNM oo ay iyagu markaa u yaqaanneen Qudhmista. Mar labaad ayaa loo yeedhay aabbo, waxaanu nooga sheekayn jiray hadba waxay ku yidhaahdaan.”
Bal hadda sheekadan xaradhaamada iyo xanuunkaba leh u fiirsada. Weli waxaynu maalaynaa gaaxdii Mujaahid Abaadir oo intaa hore ku daraya:
“Aabbo wuxu nooga sheekeeyay maalintan labaad ee loo yeedhay wixii lagu yidhi. Nimankii ‘CID’-da ayaa odeygii ku yidhi: ‘Wiilkaagii in uu tallaabay waanu og nahay. Markaa waxa lagu farayaa haddii uu soo galo in aad noo soo sheegto.’ Odeygii noo aabbaha ahaa arrintii fajac iyo anfariir ayay ku noqotay. Odeygii wuxu yidhi nimankii markii ay intaa igu yidhaahdeen, aniguna waxaan ugu jawaabay: ‘Adigu curadkaaga aan dilee ii keen miyaad iga yeeli lahayd, haddii halka aan ku jiro aad adigu ku jiri lahayd? Been mise run? Kuu soo sheegi maayo kuuna keeni maayo.'”
“Dhow dhowdu Cadduur umay dhicin,”Ma maqliin jirteen? Waa tii oo aan biyo is-marin. Miyaan hore loo odhan: “Libaax nimaan aqoon baa lax ka rita.” Nimankan Faqashtu burkaba bahal kama ay filan! Mujaahid Bashiir aabbihii ayay sidan ula hadlayaan. Hadda waa kii Bashiirkan khaatiga laga joogo dhalay, ayay ku leeyihiin inankaagu marka uu soo galo soo sheeg ama noo keenba. Af-jabhadeedkayagii tan oo kale waxaanu ku odhan jirnay: “Halkee laga dheelaa.”
Waan iska qalin-taraaray e’ aynu Mujaahid Abaadir iyo godolladiisii ku noqonno oo ka durduuranno doobiyada culan ee uu inoo gaaxshay, waxaanu intaa hore ku kabay:
“Aabbahay Ibraahin Xirsi yeedhistan iyo su’aalahan xanuunka leh waxa ku weheliya dad badan oo kale oo reer Gebilay ah. Beryaha Xukuumaddii Siyaad Barre, waxay soo rogtay in caaqil waliba soo sheego cidda ka maqan ee SNM-ta ku jirta ama Qudhmista sidii ay nafta ku maaweelin jireen.”
Allow ma run! Abaadir waa runtii oo ma ay ahayn arrin Reer Ibraahin oo keliya ku koobnayd. Waxay sheekadani I soo xusuusisay xanaftii iyo xanuunkii yeedhmooyinkaasi ku hayeen xaaskayga Mujaahid Marwo Faadumo-cawo oo si joogta ah saldhigga booliska ee Gebilay loogu yeedhi jiray, ilaa ay igu qasabtay in aan horraantii 1984kii Jabuuti geeyo, ka dibna aan dejiyo jiidihii hore ee dagaalka gaar ahaan Durya-dheer oo halgankaba hooyo u ahayd,
Dareenka ayaa I yar dhuftay oo waxaan mooday in Mujaahid Marwo Faadumo-cawo wax la weydiinayay ee iga raalli ahaada. Show Mujaahid Abaadir ayaynu muddaakarooyinkiisii dhex maaxaynay oo hadba inta aynu muquuranno madaxa la soo yar baxaynay. Wuxu intaa ku daray oo ku deexday:
“Yeedhitaankaa labaad ee aabbo loo yeedhay markii uu maqlay ayuu badhtamihii 1985kii Mujaahid Bashiir yimid miyiga Carrada Malko meel la yidhaahdo. Aabbo ayaa halkaa ugu tegay markii uu Mujaahid Bashiir farriin ka helay. Aabbo, wuxu Bashiir u sheegay in intaas oo jeer loo yeedhay oo la hor fadhiisiyay Sarkaal la odhan jiray Koore-jaan. Odeygu wuxu Bashiir u mariyay hadalladii qallafsanaa ee lagu lahaa iyo hatigaaddii loo geystay. Odeygu waxa kale oo uu Bashiir u sheegay in ay ku yidhaahdeen inankaaga waxa kaxeeyay nin laba gu’ ka weyn oo Yuusuf la yidhaahdo.”
Ninkii Bashiir ahaa aad iyo aad ayuu uga xumaaday marinnadaa xanuunka badnaa ee aabbihii la mariyay ee weliba ay walidiinta kalena la qabtay. Oo tolow, muxuu markaa yeelay? Waa kan Mujaahid Abaadir oo sheekada inoo sii kalwinayaa, waxaanu ku deexday mar kale:
“Mujaahid Bashiir aad ayuu uga xumaaday waxaa aabbihii iyo waalidiinta kaleba loo geystay. Falalkaa dadnimo-ka-baxa ahaa wuxu kaga jawaabay, laba xabbo oo ‘anti-tank’ ah ayay soo qaadeen Bashiir iyo abtigii Sheekh Muuse, waxaanay miinadii mid ku aaseen waddo isku-xidha Dhagax-madoobe oo Guuto ciidanka ahi deggenayd iyo Arabsiyo, miinadii kalena wuxu dhigay dhigay waddada u dhexaysa Gabilay iyo Dhagax- madoobe. Labadiiba waa ay qarxeen, laakiin dad waxba kuma noqon. Labadii miino midi gaadhi Sey-sey ah ayay hoboska hoose goysay, tii kalena gaadhii Koore Jaan,(Taliyihiin haystay guutadii deganayd Dhagax-madoobe), oo ahaa landcruiser nooca siiblaha looyaqaan oo markaa uu lasocday darawalkiisii oo kaliya Cabdi Sheekh Cumar Xuseen ayay xaggiisa danbe ka qaraxday xawaarihii uu ku socday awgeed. Aynu ku noqonno mowduuceennii ahaa sidii ay Reer Ibraahin Xirsi dalka kaga baxeen, ka-dib markii uu shahiiday Mujaahid Bashiir 3/4/1987kii. Abaadir wuxu yidhi ama qoraal igu siiyayba:
“Ka-dib markii aanu xaqiiqsanay in uu shahiiday walaalkay Bashiir, ayuu aabbahay go’aan ku gaadhay in aanu dalka iskaga baxno, iyada oo ay fududaatay in immika nala soo raadsado, kol haddii Bashiir oo nalgaga baqanayay shahiiday. 25kii Juun 1987kii ayuu aabbo nagu war-geliyay in aan isu diyaarinno in aanu dalka ka baxno.
Odeyga qudhiisa ayaa iska millateri ahaa oo amarrada sidii Bashiir iyo si ka daran u bixin jiray. Odeygu xagga ku-dhaca iyo dhiirrananta, mararka qaarkood waxaad is-odhanaysay isaga ayaaba Bashiirka ka darnaa. Waxa igu maqaale ah in Mo Faarax hooyadii lagu yidhi: “Wiilkaagii Maxamed ayaa adduunkii ugu dheereeyay oo lala wada yaabban yahay.” Waxa la yidhi Mo Faarax hooyadii ayaa ku-dareen-celisay: “Adduunkan yaabbani, waxaanu arag ka ii soo qaban jiray, mararka uu kaasi iga baxsado.”
Waxaynu, markanna joognaa magaalada Hargeysa. Waa 25kii Juun, 1987kii. Xafladdii calan-saarka lagu maammuusayay ayaa goobtaa ka dhacaysay. Bal hadda habeenkaana, Mujaahid Abaadir ha inooga warramo ma-hadhada isaga iyo aabbihii soo kala dhex-martay, waxaanu yidhi ama ii soo qorayba:
“Wuxu aabbo habeenkaa igu amray ama si adag ii farayba in aan tago xafladdaa calan-sarrka oo habeennimada 26ka Juun ka dhacda soona jeedaaliyo cidda madax timaadda iyo sida albaabka laga gelayaa uu yahay. Dhaqan ahaan aabbahay wuu nebcaa tegitaanka xafladaha noocan oo kale ah, waanu diidi jiray in aan tago. Bal se munaasabaddan uu ii diray waxaan u fahmay in aabbahay uu raadinayo goldaloolooyinka Faqashta iyo meelaha ay ka dagan tahay ee laga geli karo iyada oo ay xanafta mindidii ku dhcday ee geeridii Bashiir aabbahay aad u damqaday. Waan yaabbanaa oo waxaan is-lahaa malaha odeygu isaga ayaaba qoriga qaadan doona.”
Waagii ayaa beryay. Reerku wuxu u diyaar-garoobay in ay dalka ka baxaan. Intii aan la ambo-bixin ayuu Abaadir odeygii dhalay uga warramay xafladii calan-saarka ahayd ee uu xalay ku maqnaa odeyguna ku dudduucay in uu ka qayb-galo. Bal Abaadir taxanihiisii dheeraa halkii ha inooga sii ambo-qaado:
“Aroornimadii ayaan iyada oo uu diyaar noo ahaa baabuurkii aanu ku baxaynay, ayaan aabbo uga warramay sidii ay xalay xafladdii u dhacday, madaxdii joogtay iyo iyada oo albaabka aan dadka la baadhayn ee askar ulo haysta oo caruurta wixii aan qof weyn la socon joojinaysay. Intaa markii aan ku idhi aabbahay inta uu madaxa ruxay ayuu yidhi: ‘Haa…haa.’
Waxaan ugu jawaabay: ‘Aabbo bal ii warran, maxaad uga jeedday arrinka?’ Wuxu yidhi: ‘Ragga walaalkaa dilay, miyaanay kuwaa aan kuu dirayay ahayn? Maxaa adiga kaaga meel-yaalla ayuu yidhi?’ Aniga oo yaabban ayaan ku idhi: ‘Aabbo ma immikaad I weydiinaysaa,’ ayaan ku idhi: ‘Sow tii habeenkii Bashiir uu inala joogay ee aan lahaa Babastoolad ii keen aad ila yaabayseen ee aad lahaydeen weli waad yar tahay. Haddii Baastooladdii uu habeenkii sitay iiga tegi lahaa cawa aabbo rikoodh ayaan dhigi lahaa taariikh-gal ah.'”
← Deeqa-yar iyo Murtideedii
Ina-Xasan-cawke: Xarragadii iyo xaash-xaashkii Makrifoonka →